Nepal – Latest News from around the world, nepal news, breaking news, latest news, US today, Nepal today, India today
By elatestnews.com September 16, 2018 September 16, 2018
त्रि.वि. पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको ६८ औँ वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा आज मिति २०७५ भाद्र ३१ गते प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर श्रीमती हरिप्रभा खड्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त प्रभात फेरी कार्यक्रममा क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. कुमारप्रसाद कोइराला, क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. रेणुका जोशी, क्याम्पसको मानविकी तथा व्यवस्थापन सङ्कायका साथै विज्ञान तथा अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक, […]
By elatestnews.com October 24, 2017
Nepal ktm taxi
७ कात्तिक, काठमाडौं । मंगलबार बानेश्वरमा एक महिलाले ट्याक्सी रोकेर सोधिन्, ‘रातोपुल जानु छ, कति लाग्छ ? चालकले उत्तर दिए, ‘मिटरमा जति उठ्छ त्यति दिनुभए हुन्छ म्याडम ।’ उनले आश्चर्य मान्दै भनिन्, ‘किन हो त्यस्तो ? कति पैसा लिने भन्नुस् न ?’ चालकले पुनः जवाफ फर्काए, ‘सरी म्याडम, यो सारथि कम्पनीको ट्याक्सी हो । मिटरमै […]
२८ भदौ, बारा । जिल्लाको जितपुरमा रहेको शिवशक्ति उद्योगमा मंगलबार आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले शिलबन्दी गरेको छ । विभागले मंगलबार गरेको अनुगमनका क्रममा अखाद्य तेल उत्पादन गरेर उद्योगले बजारमा बिक्री–वितरण गरेको भेटिएपछि उद्योगमा शिलबन्दी गरिएको हो । काठमाडौंबाट आएको विभागको टोलीले उद्योगमा छापा पार्दै अर्को निर्देशन नआएसम्म तेल उत्पादन नगर्न र बजार नपठाउन […]